मीठा आलु र चीज क्रोकेट्स | बेजिया
मीठा आलु र चीज क्रोकेट्स
मारिया vazquez | 27/04/2021 10:00 | सुरूवात
जब हामीले यी देख्यौं मीठा आलु र चीज क्रोकेट्स को प्रोफाइल मा डाइटिसियन-न्यूट्रिशनिस्ट राकेल ब्रेनासर हामीलाई थाहा छ हामीले तिनीहरूलाई घरमा तयार गर्नुपर्‍यो। त्यसोभए हामी आफैंलाई सामान्य समस्याको साथ भेट्छौं: मसँग यो पर्याप्त छैन वा म प्राय: मेरो कुचिनमा यो घटक प्रयोग गर्दिन ... तर सबै चीजको समाधान हुन्छ!
यी क्रोकेट्सलाई परम्परागत जस्तै प्रयोग गर्न बेकमेल तयार गर्नु आवश्यक पर्दैन। भुटेको मीठो आलुको मासु, चीज, क्रीम र जिलेटिनको संयोजन गरेर आटा तयार पारिन्छ। Jelly? तपाईं यसलाई दिन सक्नुहुन्छ तर तपाईंसँग जाँच गर्ने समय कसरी हुन्छ आटा ह्यान्डल गर्न सजिलो छैन यो प्रयोग गरेर पनि।
क्रोकेट्स बनाउनको लागि समय सबैभन्दा नाजुक हुन्छ। आटा बनाउने धेरै सरल छ, तर यसलाई फ्रिजमा आराम दिए पछि, क्रोकेटहरू तयार गर्ने समय भयो। र तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो हातले आकार दिन सक्नुहुन्न, परम्परागत जस्तै। तपाईलाई दुई चम्मच र केहि धैर्यता चाहिन्छ। अब उसलाई मीठो स्वाद र मलाईदार बनावट क्रोकेट्सका उनीहरूले यसको लागि बनाएको भन्दा बढी।
385 1 g भुटेको मीठा आलुको मासु (१ ठूलो मीठा आलु)
1 तटस्थ जिलेटिन को पाना
M० मिलि। % 60% फ्याटको साथ क्रीम
माखन को एक चम्मच
G 55 ग्राम मोजारेला चीज (काटिएको र राम्ररी निकालिएको)
मीठो आलु भुनें। यसो गर्नका लागि २००nC मा ओभन प्रिहिएट गर्नुहोस्, मीठो आलु राम्रोसँग धुनुहोस् र यसलाई ओभन ट्रेमा सुक्खा पार्नुहोस्, अलि जैतुनको तेलले गलाएको छ। 200 मिनेट वा पूरा नभएसम्म बेक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई चुल्हाबाट बाहिर निकाल्नुहोस् र यसलाई चिसो हुन दिनुहोस्।
यो चिसो जस्तै, जिलेटिन हाइड्रेट्स केही मिनेट को लागी न्यानो पानी संग एक कचौरा मा।
एकै समयमा, एक सासनमा क्रीम तताउनुहोस् यो उमाल्न अनुमति बिना। एकपटक तातो भएपछि तातोबाट हटाउनुहोस्, जिलेटिन थप्नुहोस् र यो फरक नहुँदा सम्म मिसाउनुहोस्।
एकपटक मीठो आलु तातो छ, लुका हटाउनुहोस् र एक कचौरा मा संकेत रकम राख्नुहोस्, काँटा संग क्रसिंग।
पगालेको माखन थप्नुहोस्, जिलेटिनको साथ क्रीम, चीज र स्वादको लागि। राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस् यदि तपाईंले नुन बिन्दु सुधार गर्नुपर्दछ र यसलाई एक घण्टा फ्रिजमा राख्नुहोस्, कचौरालाई प्लास्टिकको र्‍यापले छोप्नुहोस्।
समय बित्यो, क्रोकेट्स बनाउनुहोस् दुई चम्मच प्रयोग गर्दै। त्यसपछि बिस्तारै तिनीहरूलाई पिठो, पिटेको अन्डा, र ब्रेडक्रमहरूमा रोल गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई फ्रिज अघि फ्रिजमा अर्को घण्टा राख्नुहोस्।
अन्तिम क्रोकेट्स प्रशस्त तेलमा फ्राई गर्नुहोस् ब्याचहरूमा तातो हुनु, जाडो कागजमा थप फ्याट निस्कन अनुमति दिए जस्तै तपाईले हटाउनुहुन्छ।
तातो मीठो आलु र चीज क्रोकेट्स सेवा गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » सुरूवात » मीठा आलु र चीज क्रोकेट्स
Glasses प्रकारको चश्मा तपाईंको तालिका पूरा गर्न